MainWP: तपाईंको वर्डप्रेस साइटहरू केन्द्रीय प्रबन्ध गर्नुहोस् Martech Zone
MainWP: तपाईंको वर्डप्रेस साइटहरू केन्द्रीय रूपमा प्रबन्ध गर्नुहोस्
सोमबार, फेब्रुअरी 8, 2016 मंगलवार, फेब्रुअरी 9, 2016 Douglas Karr
Automattic मा महान मान्छेहरु निकट एकीकृत गरीरहेको छ केन्द्रीकृत WordPress प्रबंधन तिनीहरूको माध्यमबाट jetpack जोड्नु। मैले पहिले नै यससँग एउटा मुद्दामा भाग लगाएको छु, यद्यपि, मेरो भूतपूर्व सबै हराउँदै jetpack विश्लेषण जब मेरो साइट कुनै प्रकारले विच्छेदन भयो र यसको सट्टा एक स्टेजिंग साइट जडान भयो। यो एकदम बम्मर थियो - र म आभारी छु कि म Google एनालाइटिक्स पनि स्थापना गरेको छु।
यदि तपाईं एक विशाल प्लेटफर्ममा निर्भर तपाईंको सबै उपकरणहरू चाहनुहुन्न jetpack, त्यहाँ विकल्पहरू छन्। हालसालै, एक उन्नत वर्डप्रेस प्रयोगकर्ता समूहले छलफल गर्‍यो MainWP। साथै, MainWP कसरी एकाधिक साइटहरू ब्यबश्थित छन् भन्ने फरक दृष्टिकोण लिन्छ - जस्तै तपाईंलाई प्रकाशन सामग्री क्रस गर्न र साइटहरूमा प्रयोगकर्ताहरू थप्ने सक्षम पार्ने।
MainWP १००,००० भन्दा बढी स्थापनाहरू छ र नि: शुल्क कोर सुविधाहरूको एक मजबूत सेट कायम राख्न जारी गर्दछ:
सजिलो व्यवस्थापन - MainWP ड्यासबोर्डले तपाईका थिमहरू र प्लगइनहरू प्रबन्ध गर्न परेशानी लिन्छ। तपाइँ तत्काल समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको कुन WordPress साइटहरूमा एक केन्द्रीय स्थानबाट उपलब्ध अपडेटहरू छन्। केवल एक क्लिकले तपाईंको लागि सबै अपडेट गर्दछ।
त्यागिएका प्लगइनहरू - मुख्य WWP अन्तिम प्लगइनहरू र विषयवस्तुहरूको स्थिति जाँच गर्दछ र सतर्क गराउँदछ यदि तपाईंलाई समयको एक निश्चित रकममा अपडेट गरिएको छैन भने। यसले तपाईंलाई अन्तर्दृष्टि दिन्छ यदि प्लगइन वा विषयवस्तु लेखकले परित्याग गरेको हुन सक्छ ताकि तपाईं अधिक अप टु डेट प्लगइन हेर्न सक्नुहुन्छ।
एक क्लिक पहुँच - तपाईंको MainWP ड्यासबोर्डको साथ तपाईं प्रत्येक URL टाइप गर्न बिर्सनु सक्नुहुनेछ, लगइन र तपाईंको बाल साइटहरू WP-Admin पहुँच गर्न पासवर्ड। हामीले तपाईको सबै WordPress साइटहरूमा पहुँच राख्यौं हाम्रो सहज ज्ञान युक्त एक-क्लिक पहुँचको साथ एक ब्रीज। तपाईंको साइट उप-मेनूमा नेभिगेट गर्नुहोस् र खोल्न प्रशासक लिंक क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईं तत्काल लग इन हुनुभएको छ र प्रबन्ध गर्न तयार हुनुहुन्छ। हराउनको लागि अधिक लगइनहरू र पासवर्डहरू छैनन्!
एक क्लिक अपग्रेड - तपाईको मेनडब्लुपी ड्यासबोर्डका साथ तपाईले तपाईका सबै साइटहरू केवल एक बटनको एक क्लिकको साथ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको साइटहरू प्रत्येक लगइन गर्न कुनै कारण छैन अब उपलब्ध अपडेटहरूका लागि जाँच गर्दै। तपाईं थिम वा प्लगइन अपग्रेडहरू स्वचालित पनि गर्न सक्नुहुनेछ (वा तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्)।
विश्वसनीय ब्याकअप - तपाईको मेनडब्लुपी ड्यासबोर्ड ब्याकअप सुविधा प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईको सबै WordPress साइटहरूका लागि प्रीमियम-गुणवत्ता ब्याकअप सेवाहरूको आनन्द लिनुहोस्। तपाईले खास फोल्डरहरूलाई हटाउनको लागि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन मिशन महत्वपूर्ण छैन। तपाइँ तपाइँको जगेडा स्वचालित पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको आवश्यकता अनुसार विभिन्न साइटहरूको लागि बिभिन्न सेटिंग्स हुन सक्छ।
सामग्री व्यवस्थापन - साइटहरूमा सामग्री प्रकाशन गर्न अब सजिलो छ। सूचीबाट तपाईंको साइट छान्नुहोस्, सामग्री लेख्नुहोस्, र प्रकाशित गर्नुहोस्, प्रत्येक र प्रत्येक साइटमा लग इनको समस्या बिना। लिंक, टिप्पणीहरू, र स्पाम पनि हाम्रो सामूहिक प्रकाशन, मेटाउने र स्पाम प्रकार्यहरू प्रयोग गर्न प्रबन्ध गर्न यो सजिलो छ।
प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन - तपाइँको बच्चा साइटहरु मा प्रयोगकर्ताहरु को प्रबन्धन गर्न को लागी अब सजिलो छ। तपाइँ तपाइँको सबै साइटहरु बाट तपाइँको सबै साइटहरु बाट तपाइँको मुख्य WWW ड्यासबोर्ड बाट तपाइँको प्रत्येक WordPress साइटहरुमा लगईन गर्न को लागी ब्यबस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वयं होस्ट गरिएको - तपाईंको मुख्य MainWP ड्यासबोर्ड एक प्लगइन हो जुन तपाईंको आफ्नै WordPress मा होस्ट गरिएको छ र हाम्रो निजी सर्वरमा होईन। हामी तपाइँका कार्यहरू, बाल साइटहरू वा तपाइँ कसरी प्लगइन प्रयोग गरिरहनु भएको रेकर्ड राख्दैनौं।
सदस्यताका लागि साइन अप गर्नुहोस् र तपाईले पहुँच पाउन सक्नुहुनेछ MainWP बाट बन्डल, over 36 भन्दा बढि प्रीमियम एक्सटेन्सनहरू जसले शक्तिशाली क्षमताहरू थपे जुन तपाईले कहिँ पनि पाउनुहुने छैन। टुटेको लिंक जाँच, पृष्ठ गति विश्लेषण, विश्लेषण एकीकरण, पोष्ट अनुसूची, बल्क सेटिंग्स प्रबन्धन, अपटाइम निगरानी, ​​र ब्ल्गावल्ट माइग्रेसन।
MainWP का लागि निःशुल्क साइन अप गर्नुहोस्!
टैग: स्वचालित वर्डप्रेस ब्याकअपकेन्द्रीकृत वर्डप्रेस प्रबंधनmainwpवर्डप्रेस स्वत: अपग्रेडWordPress बैकअपWordPress व्यवस्थापनवर्डप्रेस प्लगइन अपग्रेडWordPress थीम अपग्रेडवर्डप्रेस अपग्रेड
फेब्रुअरी १,, २०११ 9:१:2016 अपराह्न
यो एक महान अवधारणा हो। यो तपाईंको लागि कती राम्रो काम गर्दछ, डग?
हामी भर्खरै एक नेटवर्क र्‍याम्पिंग गर्दैछौं जहाँ हामी यसलाई व्हिटनी प्रयोग गर्नको लागि राख्न जाँदैछौं। अहिले सम्म, हामीले यी कार्यहरू केहि असफल पार्न प्रबन्धित WordPress होस्टिंग प्रयोग गर्यौं। मलाई होस्टिंग र साइट प्रबन्धन उद्योगमा एजेन्सी हुन मनपर्दैन - म यसको सट्टा होस्टको लागि बढी तिर्ने गर्छु जसले यसको ख्याल राख्छ।